गृहपृष्ठ » जीवनशैली » कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित]
बुधबार १० मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं । सानोमा धेरैलाई कपाल काट्न डर लाग्ने गर्दछ । कान नरहने पो हो की लगायत विभिन्न डरका कारण धेरै बच्चाहरु मानसिक रुपमा यसका लागि तयार हुँदैनन् । धेरैलाई जानकारी छ कि बच्चा धेरै नै जिद्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । यस्तै एक बच्चाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
यो भिडियो देखेर तपाईं पनि हाँस्नुहुनेछ । प्रायः हरेक आमाबुबाका लागि आफ्ना बच्चाको कपाल काट्नु निकै संघर्षपूर्ण कार्य हुन्छ । यस भिडियोमा बच्चा कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै चिच्याउन थाल्छन् । उनी कपाल नकाट्न भन्दै सम्झाइरहेका छन् ।
बीच बीचमा बच्चाले नाई (कपाल काट्ने व्यक्ति) लाई चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि बच्चा कुर्सीमा कराइरहका छन् । तर नाईले उसको कपाल काटिरहेका छन् । जब कपाल काट्न बच्चालाई समातियो उनले जोडले चिच्याउँदै भनेका छन्, ‘ए, तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
के तपाईले आफ्नो कपाल पूरै काट्नु हुन्छ ? ’ नाईले उनलाई शान्त गराउन बच्चाको नाम सोधेका छन् । जसमा उनले भने, ‘मेरो नाम अनुश्रुत हो र अनुश्रुताले कपाल काट्न चाँहदैन् ।’ यो सबै गर्दा पनि नभएपछि बच्चाले कपाल काट्ने व्यक्तिलाई चेतावनी दिन थाल्छन् ।
चेतावनी दिदैँ उनी भन्छन्, ‘म एकदम रिसाएको छु । म तिम्रो सबै कपाल काट्छु ।’ यो भिडियो उसको बुबा अनूपले ट्विटरमा साझा गरेका छन् । साथै क्याप्शन पनि लेखेका छन्, ‘मेरो छोरो अनुश्रुत, यो हरेक अभिभावकको लागि संघर्ष हो ।’ उनले कपाल काटेपछिको भिडियो पनि सेयर गरेका छन् । लाखौं व्यक्तिहरुले यो भिडियो हेरेका छन् ।
यी शर्षक झनै रोचक छन्